Horudhac: Norwich City vs Liverpool… (Wax waliba oo aad doonayso inaad ka ogaato kulanka hoggaamiyeyaasha horyaalku booqanayaan Carrow Road) – Gool FM
(Norwich) 15 Feb 2020. Kooxda ugu hooseysa horyaalka Premier League ayaa soo dhoweynaysa naadiga hoggaaminaysa horyaalka Premier League ee Liverpool.
Norwich City ayaa garoonkeeda Carrow Road waxa ay cawa ku qaabilaysaa naadiga laga adkaan la’yahay ee Liverpool.
Labada kooxood ee caawa ciyaaraya waxaa u dhaxaysa farqi 55-dhibcood ah, kooxda Reds ayaana doonaya inay ku guuleysato horyaalka Premier League oo ay sugeysay muddo 30-sanadood ah, halka Norwich ay u baahan tahay inay ka fogaato inay u laabato Championship-ka.
Taariikhda: Sabti, 15 Feb 2020
Norwich City ayaan qabin wax dhaawacyo cusub ah, waxaana ay soo dhoweynayaan kulanka daafacooda Ben Godfrey, kaasoo ganaax kaga maqnaa.
Xiddiga mudada dheer ka maqnaa ee Timm Klose ayaa la rajaynayaa inuu dib ugu soo laaban doono ka hor dhammaadka xilli ciyaareedkan, isagoo hadda sii wada soo kabashadiisa dhaawac halis ah oo dhanka jilibka ah.
Laacibka khadka dhexe ee James Milner ayaa qarka u saran inuu noqdo mid la heli karo oo diyaar ah kaddib 7 kulan oo uu la maqnaa dhibaato dhanka bowdada ah.
Weeraryahanka Liverpool ee Sadio Mane ayaa dhaawac kan Milner oo kale ah qaba, laakiin Xherdan Shaqiri ayaa weli ka maqan.
>- Liverpool ayaa guuleysatay 16-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Kooxda Liverpool ayaa ugu yaraan labo gool dhalisay 30 ka mid ah 34-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Liverpool ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay 9 ka mid ah 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay Premier League.
>- Kooxda Liverpool ayaa dhalisay ugu yaraan 3 gool 7 ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahaday Norwich City tartammada oo dhan.
>- Reds ayaa guuleysatay shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqatay Norwich City tartammada oo dhan.
>- Norwich ayaa ku guuldarreysatay inay guuleysato 11 ka mid ah 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Kooxda Norwich City ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay Liverpool tartammada oo dhan.